Neymar oo taageero wayn ka helay labo Halyeey oo soo maray Man United kaddib markii uu si xun u weeraray Garsoorayaasha kulankii Xalay – Gool FM
Byare March 7, 2019
(Europe) 07 Maarso 2019. Manchester United ayaa xalay si lama filaan ah ugu soo gudbtay wareega sideed dhammaadka Champions League kaddib markii ay 3-1 uga adkaadeen PSG oo joogta mininkeeda.
Cidna ma saadaalineyn inay soo bixi doonto United oo gurigeeda 2-0 looga soo adkaaday lugtii hore, balse rigoore muran badan dhalisay oo ay heleen daqiiqadihii lagu daray ciyaarta ayaa ka saaciday inay u soo baxaan Quarter Final ka CL.
Neymar oo ciyaarta kor ka daawanayay maadaama uu dhaawac ku maqnaa ayaa si xun u weeraray garsoorayaashii go’aamiyay Rigoorada, waxaana ku taageeray Daaficii hore ee Manchester United Rio Ferdinand iyo waliba weeraryahankoodii hore ee Michael Owen oo qaba inay Rigoorada qalad ahayd.
“Tani waa facshar, waxay meesha masuul uga dhigeen afar qofood oo waxba ka garaneyn kubbada cagta kuwaa oo eegaya ku soo celiska VAR,” Neymar ayaa sidaa ku soo qoray Baraha Bulshada.
“Wax rigoore ah ma jiraan, sidee maano u noqon kartaa marka ay dhabarkiisa ku dhacdo.”.
“Ma aaminsani inay rigoore tahay, laakiin inaad dhabarka jeediso adoo daafac ah waxaa lagugu ciqaabayaa wax sidaa oo kale ah.
Owen ayaa isna yiri:
“Ma aaminsani inay sinna rigoore ku tahay, aniga ahaan rigoore ma ahan qofkasta oo halkan joogana sidaas ayuu aaminsan yahay.”.
“Waxa ku dhacay Real Madrid waa suuragal inay nagu dhacaan” - Valverde
SAWIRRO: Geesiyaashii xalay dhigay Mucjisada oo dib ugu soo laabtay Magaalada Manchester